Haweeneydii Shalay Lagu Qabtey Muqdisho oo Sheegtay Inay Is Qarxin Lahayd Hadii ay Haysan Lahayd Miino (VIDEO) - iftineducation.com
iftineducation.com – Haweeneydii shalay ciidamada Sirdoonka Qaranka ay ku qabteen magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Leyla Cumar Baaruud, ayaa waxaa maanta lagu soo bandhigay Xabsiga Godka Jilicow ee Degmada Boondheere,
Haweeneydani ayaa shalay subax lagu soo qabtay hawlgal gaar ah oo laga sameeyay Degmada C/casiis ee Gobolka Banaadir.
Islaantani ayaa la sheegayaa inay u dhaxdo Sarkaal Ajaaniibta Ururka Al Shabaab ka tirsan, oo dhalashadiisa lagu sheegay Itoobiyaan, waxaana gacanta lagu soo dhigay, xilli ay damacsaneyd inay safar ugu amba baxdo Degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe.
Ciidamada Sirdoonka Soomaaliya ayaa sheegay inay shantii bilood ee la soo dhaafay ay ku daba joogay haweeneydan, oo sida la sheegay ku dhuumaaleysaneysay Magaalada Muqdisho.
Leyla Cumar Baaruud, ayaa waxay ku baaqday in codkeeda aan waxba laga jarin, iyadoona ku talisay inay waajib tahay in la dilo Madaxweynaha, Ra’iisal Wasaaraha, Wasiirada iyo Xildhibaanada Baarlamaanka.
Haweenaydani ayaa sheegtay inay iyadu isku qarxin lahayd hadii ay haysan lahayd jaakadaha la’isku qarxiyo, waxayna xitaa murtidiin ku tilmaamtay wariye yaashii waraysanayay.